Gcina zonke izingqungquthela zethu zeSkype ngeTalkHelper | Izindaba zamagajethi
Ngabe ukhuluma nenombolo enkulu yoxhumana nabo ku-Skype nsuku zonke? Lokhu akufanele kube yinto exakile kulabo abazibheka njengabantu bezenhlalo noma bebhizinisi, ngoba kulezi zindawo zombili ukuxhumana (umuntu nomuntu) kungahle kudingeke ngomhlangano wevidiyo wokwelashwa kwenani elithile lezihloko.
Njengoba iMicrosoft isanda kufika ukuzosebenzisa izinkomfa zevidiyo zeqembu nge-Skype, eziningi zazo zingadingeka kithina, uma inkinga ephakanyiswe kuleli qembu lomhlangano wevidiyo inokuhambisana okukhulu okwanele kuwo wonke umuntu. Kungaleso sikhathi lapho kufanele sizame ukuthola ithuluzi elithandekayo elinegama leTalkHelper, okuyi kuzosisiza ukuthi sizisindise ngokuphelele zonke izinkulumo lokho sikwenza nge-Skype nakukhompyutha yethu ye-Windows.
1 Ungayifaka kanjani iTalkHelper kuWindows ukuze usebenze ngeSkype
2 Atholakala kuphi amavidiyo abanjwe ngeTalkHelper ngeSkype?
3 Ukucatshangelwa okujwayelekile kokuphatha i-TalkHelper
Ungayifaka kanjani iTalkHelper kuWindows ukuze usebenze ngeSkype
Yize kuyiqiniso ukuthi landa kusuka kuwebhusayithi esemthethweni ye-TalkHelper Akufanele imele noma yiluphi uhlobo lwezinkinga, zingavela uma inqubo yokufaka ingenziwa kahle. Umthuthukisi uphakamisa ukuthi ukuhleleka ngokulandelana kwesikhathi kokufakwa kwesiphakamiso sayo, kukucabangisisa lokho okokuqala kufanele ufake i-Skype kukhompyutha ye-Windows, kungakhathalekile inombolo yenguqulo esetshenziselwe lolu hlelo lomhlangano wevidiyo. Lapho iSkype ifakiwe kwiWindows, kuzofanele uqhubeke nokufaka iTalkHelper, ngoba eyokugcina empeleni iluhlobo lwe-plugin oluzofakwa kuyo yonke imisebenzi yensizakalo ye-Microsoft videoconferencing service.
Ngokuyisisekelo ukuphela kwento esizodinga ukuyenza ukuze yonke into ihlelwe kahle, kufanele iqhubeke kuphela ukusebenzisa i-Skype ku-Windows.
Atholakala kuphi amavidiyo abanjwe ngeTalkHelper ngeSkype?
Lokhu kuba yingxenye ethakazelisa kunazo zonke, ngoba unjiniyela wethule uhlelo lapho isiphakamiso sakhe (iTalkHelper) isebenza ngokuzenzakalela ngaso sonke isikhathi lapho kuvulwa i-Skype bese kwenziwa ikholi yevidiyo noma uhlelo lwengqungquthela yevidiyo. Lokhu kusho ukuthi umsebenzisi ngeke aze enze lutho, ngoba i-plugin izosebenza yodwa, iqopha amavidiyo noma imisindo ngokuya ngohlobo lwenkulumo olusebenzayo ngaleso sikhathi.
Ukuze ukwazi ukuthola wonke amafayela (alalelwayo noma amavidiyo) agcinwe nge-TalkHelper kuphela kufanele ikuqondise endaweni esiyiphakamisile phezulu usebenzisa iWindows File Explorer yakho kuphela. Kumele ubheke ukuthi kuleli kheli esilinikeze lona kuzodingeka ukuthi ufake igama lomsebenzisi elingu-Windows kwikhompyutha yakho esikhundleni se- "Username".
Ukucatshangelwa okujwayelekile kokuphatha i-TalkHelper
Uma uya endaweni esiphakamise ngayo ngenhla, uzohlangabezana namafayela alalelwayo noma wevidiyo, azoncika ekutheni ngabe usebenzise i-Skype ngengqungquthela yezwi noma yomsindo nevidiyo. Ungahlela le plugin ukuze lawo mafayili akhonjiswe ngefomethi ethile, emele ukuba namafayela alalelwayo ngefomethi ye-mp3 noma ye-wav, ngenkathi amafayela evidiyo azoba ngohlobo lwe-AVI kepha asebenzise i-XVid codec njenge-compressor. Ngenxa yokugcina, kungenzeka Udinga ukufaka isoftware ethile yokufaka ikhodi Uma ungenayo okwamanje kukhompyutha yakho ye-Windows, ngaphandle kwalokho, ngeke ube namandla okudlala le midiya.
Umthuthukisi waleli thuluzi ukhulume ngenombolo ethile yezici ezikhethekile ezingaphatha ngaphakathi kwalo:
Awudingi ukwenza noma yini isebenze ngeTalkHelper, ngoba zombili izingqungquthela zezwi nezevidiyo izogcinwa ngokuzenzekelayo endaweni esishilo ekuqaleni, amafayela ongawadlala ngaphandle kwenkinga ngeWindows Media Player (noma elinye ithuluzi elikhethekile).
Ngaphandle kokuthi i-plugin ye-TalkHelper isebenza ngokuzenzakalela, kusukela ekucushweni kwayo umsebenzisi angasebenza ukonga kwefayela kwi-hard disk nganoma yisiphi isikhathi.
I-TalkHelper iyi iyahambisana nazo zonke izinhlobo ze-Skype inqobo nje uma isebenza kuWindows kuphela.
Ngaphandle kokungabaza, leli thuluzi elincane lingasiza kakhulu kubo bonke labo abaxhumana ne-Skype nsuku zonke, ngisho nangaphezulu kusuka okungenzeka ukuthi wabamba ingqungquthela, inkambo eku-inthanethi noma yiluphi uhlobo lwenkulumo ebalulekile ngoba ngayo, ungabuyekeza kahle konke okukhulunywe ngakho kule nsizakalo ye-Microsoft videoconferencing service.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-TalkHelper: gcina ngokuzenzakalela amakholi wethu wevidiyo we-Skype
Ungaphuma kanjani kwi-ID yethu yeMicrosoft ku Windows 10